မိုက်ဒိုက် .. မိုက်ဒိုက် ..မိုက်အောင် …မိုက်အောင် . | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုက်ဒိုက် .. မိုက်ဒိုက် ..မိုက်အောင် …မိုက်အောင် .
2 Responses to မိုက်ဒိုက် .. မိုက်ဒိုက် ..မိုက်အောင် …မိုက်အောင် .
မွန်လူမျိုးတဦး on June 3, 2012 at 5:13 am
အိုးဝေအောင် on June 3, 2012 at 5:34 am
ဆရာမိုးကြိုး..ထိုင်းစကားတချို့ ဘာသာပြန်တာ လွဲနေတယ် ။သေချာအောင် ထိုင်းစကားပြောတတ်တဲ့ မြန်မာပြည်ဖွားတွေကို မေးပြီးမှ ရေးစေချင်တယ်။ ဥပမာလေးတွေ ရေးပြလိုက်မယ်။ ဒါလည်း သေချာအောင် တကယ်သိသူတွေထံ ထပ်မေးမြန်း အတည်ပြုပြီးမှ ယုံပါ။ ဥပမာ-(မကောင်းဘူး=မိုက်ဒီး။ မရဘူး=မိုက်ဒိုက်။ မယူဘူး=မိုက်အောင်း။ )ဖြစ်ပါတယ်။ ((ဟုတ်ကဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အမျိုးသားပြောတာနဲ့အမျိုးသမီးပြောတာ ကွဲလွဲပါတယ်။)) ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဆိုရင် =”ခပ်(ပ်) ”လို့ သုံးပြီး…။ ဟုတ်ကဲ့ ရှင် ဆိုရင်=”ခါ့”လို့သုံးပါတယ်။ (ဥပမာ-ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ဆိုရင်= ခေါ်ဖွန်ခပ်(ပ်) ဖြစ်ပြီး ။ကျေးဇူးပါရှင် ဆိုရင် =ခေါ်ဖွန်ခါ့ ဖြစ်ကြောင်းပါ။) ဆရာမိုး။